दमनमा उद्यत शैक्षिक उद्यम – Nayapath.com
आज संविधान दिवस
कविता – परिवर्तन
Mitchell Marsh recalled for Fifth Ashes Test
तीज गीत प्रतियोगितामा डस्विन उपहार
तीज: हिजो र आज
सिर्जनशीलमा देवकोटाका उपन्यासबारे विमर्श
दमनमा उद्यत शैक्षिक उद्यम
म मेरो हेडमास्टरसँग शिर ठाडो गरेर बोल्ने हिम्मत गर्न सकिनँ । किनकि म विद्यार्थी थिएँ । मलाई गोडा फाट भनियो, गोडा फाट गरेँ । हातमाथि भनियो, हात माथि लगेँ । हात तल भनियो तल झारेँ । दाँया बाया भनियो, त्यसै गरेँ । मलाई घुँडा टेक्न लगाइयो, घुँडा टेकेँ ।….कुखुरा बनेँ । हो, म पुरै आज्ञाकारी र अनुशासित बनेँ । म संस्कारयुक्त विद्यार्थी बनेँ ।
म मेरा शिक्षकसँग प्रति प्रश्न गर्ने हिम्मत गर्न सकिनँ किनकि उहाँ शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, म विद्यार्थी । मेरो प्रश्न र जिज्ञासा कक्षामा होहल्ला भयो, मैले सहेँ । मलाई शिक्षकलाई सिधै हेर्न हुन्न भनेर सिकाइयो, त्यसै गरेँ । मलाई अरुले लेखेका ठूला ठूला ठेली कण्ठस्थ गर्न लगाइयो, कण्ठस्थ गरेँ । जब मलाई पूरै अनुशासनको नियमले बाँधियो तब म अब्बल विद्यार्थी ठहरिएँ । तर म आज जब विगततिर फर्किएर बुझ्न थालेँ तब त्यो फगत ममाथि अनुशासनका नाममा लगाइएको लगाम थियो । त्यो केबल मेरो शारीरिक र भौतिक अवस्थाको मात्र नभएर मानसिक सिर्जनशीलता र बौद्धिकता माथिको लगाम थियो । जसरी मलाई अनुशासनका नाममा एकपछि अर्को बहानामा कैद गर्दै गइयो, त्यसरी नै मेरो सिर्जनशीलता र ज्ञानलाई खुम्च्याउदै लगियो । यो दमनको संस्कृतिबाट म मात्र नभई मजस्ता लाखौँ विद्यार्थी पीडित बने र आज पनि पीडित छन् ।
विद्यालयलाई शिक्षाको मन्दिर मानिन्छ । जहाँ स–साना कलिलो मस्तिष्कका विद्यार्थीहरुको सुन्दर संसार सजाउने कला, समाजप्रतिको अपनत्व र परिवारप्रतिको दायित्व, जिम्मेवारी बोध गर्ने क्षमताको विकास हुन्छ भन्ने विश्वास गरिएको हुन्छ । विद्यार्थीलाई जिज्ञासु बनाउनु, प्रश्नकर्ता बनाउनु र स्वविवेक र सामाजिक चेतको विकास गराउनु विद्यालयको जिम्मेवारी हो । न कि दुई चार बनावटी प्रश्नको उत्तर घोकाएर अब्बल विद्यार्थीको दर्जा दिनु ?
मेरो मनमा एउटा प्रश्न सधैँभरि नाचिरहन्छ । एउटा विद्यार्थी विद्यार्थी जस्तो भएर शिक्षा आर्जन गर्न पाउने कि अरुको निर्देशनमा अरुले निर्माण गरेका ज्ञानलाई आफ्नो ज्ञान ठानेर सन्तुष्ट बन्ने ? एउटा विद्यार्थीले स्वतन्त्र र स्वतस्फूर्त ज्ञान आर्जन गर्न पाउने अधिकार, सिर्जना र आविष्कारको बाटोलाई अबरुद्ध गर्ने कि स्वतन्त्र छोड्ने ? यी प्रश्न केवल जिज्ञासामात्र होइनन् । हाम्रो पठन संस्कृति र हाम्रो वास्तविकतासँग जोडिएका छन् ।
आजका विद्यार्थीमा आलोचनात्मक चेत छैन होइन, आलोचनात्मक चेतलाई दबाउने प्रयास भएको छ । अनुशासनको बहानामा होस् या अन्य कुनै । दमित र क्षणिक घोकाइ देखावटी र बनावटी हुन जुन क्षणिक हुन्छ । ज्ञान स्वतःस्फूर्त मार्गबाट मात्र सम्भव छ । जो व्यक्तिले आफ्नो निजत्वबाट आर्जन गर्छ । यो कसैको दबाबमा आर्जन गर्ने जिनिस होइन । आलोचनात्मक चेत पनि यसैबाट प्राप्त हुन्छ ।
विद्यार्थीलाई आलोचनात्मक चेतको विकासविना नै अब्बल बनाउन खोज्दा त्यसले उसको भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? यसप्रति खै सचेत बनेको ? व्यक्तिको व्यक्तित्व विकासमा दुइटा कुराले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । पहिलो स्वनिर्णय क्षमता र दोस्रो आलोचनात्मक चेत । आलोचनात्मक चेत भनेको केवल आलोचनामात्र गर्ने भन्ने होइन । यो त राम्रोको समर्थन र नराम्रोको विरोध हो । जो सचेत व्यक्तिले मात्र गर्न सक्छ । स्वनिर्णयको क्षमता पनि यसैबाट विकास हुन्छ ।
यसै सन्दर्भमा प्रसिद्ध भाषाशास्त्री नोमचमस्कीको शिक्षा सम्बन्धी विचार मननीय देखिन्छ । उनकाअनुसार, ‘हाम्रा अधिकांश शैक्षिक संरचना अनुशासन र वफादारी सिकाउने तथा प्रश्नमाथि दमन गरिने सांस्कृतिक कारखाना हुन् ।’ उनको यो विचार शताब्दियौँ अगाडिको विचार हो । त्यसपछि पनि शिक्षा क्षेत्रमा अनेकन वद्लाब आएको देखिन्छ । तर पनि दमन संस्कृतिलाई भने हामीले त्याग्न सकेका छैनौँ । विद्यार्थी काँचो माटो हुन् । जस्तो आकार दियो त्यस्तै बन्छन भन्ने पुरानो मान्यता अझै पनि कायम छ । अब विद्यार्थीलाई हाम्रो चाहनानुसारको आकार दिने नभई उनीहरुको चाहनानुसार आफ्नो आकार आफैँ निर्माण गर्ने परिवेश निर्माण गरिनुपर्छ । माटो र मस्तिष्कलाई कुनै अर्थमा पनि तुलना गर्न सकिँदैन ।
ज्ञानको उत्पादन सत्तासँग जोडिने विषय हो । सत्ताले जस्तो ज्ञान उत्पादन गर्छ, नागरिकले त्यसलाई नै ज्ञान ठान्छन् भन्ने विषय अब पुरानो भयो । अब सबैसँग आलोचनात्मक चेत नभए पनि केहीसँग सत्ताको ज्ञानलाई अवज्ञा गर्ने हिम्मत जुट्न सक्छ । आलोचनामात्र नभई फरक धारको ज्ञान विकास गर्न सक्छ । अबको सत्ताले व्यक्तिको चेतलाई नियन्त्रण गर्न खोजेर नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन । विश्व परिवेश र विज्ञान प्रविधिले धेरै कुरा सत्ताको पहुँचभन्दा बाहिर राखेको हुनसक्छ ।
अबको ज्ञान जिज्ञासा, तर्क र प्रश्नबाट निर्मित हुनुपर्छ । शिक्षकको प्रश्नको जवाफ दिनेमात्र नभई विद्यार्थीको प्रश्नको समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विद्यार्थी केवल शिक्षकको प्रश्नको जवाफ दिन्छ भने आफ्नोपनको विकास कसरी सम्भव हुन्छ ? प्रश्न सोध्नु हल्ला होइन, जिज्ञासा राख्नु अज्ञानता होइन, आफ्नोपनको विकास हो । प्रश्न र जिज्ञासाबाट आर्जित बौद्धिकता नै ज्ञान हो । यसले नै विद्यार्थीको बौद्धिकता र सिर्जनशीलताको विकास गर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा प्रायः सबैजसो शिक्षणसंस्था नियन्त्रणमुखी छन् । निजी हुन् कि सार्वजनिक वा सामुदायिक सबै शिक्षण संस्थामा यो दमनको प्रवृत्ति हावी छ । विद्यार्थीको स्वतन्त्र सिकाइको मार्गलाई अवरुद्ध गर्ने दमनको संस्कृति कायम छ । अनुशासित र वफादार बनाउने बहानामा विद्यार्थीर्को स्वतन्त्र मार्गलाई कुण्ठित गर्ने र प्रश्नमाथि दमन गर्ने प्रवृत्ति रहेसम्म एउटा वफादार रैती त बन्न सक्ला तर सक्षम र असल नागरिक बन्न सम्भव छैन ।
July 20, 2019 July 21, 2019
सन्दर्भ: गुरु पूर्णिमा
Would your mobile phone be powerful enough to get you to the moon?
‘स्टान’ कास्कीको रिलायन्स विज्ञान हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता सम्पन्न
August 24, 2019 August 24, 2019
न्यू मोडल डाइनामिकमा नव–आगन्तुक विद्यार्थीको स्वागत
Youth havealove-hate relationship with tech in the digital age
Chemistry Health and Medicine Neuroscience
Chemistry Health and Medicine
Scientists Synthesize Anti-Cancer Molecules in ‘Landmark Discovery’
CERN: Study sheds light on one of physics’ biggest mysteries – why there’s more matter than antimatter
Adolescence can be awkward. Here’s how parents can help their child make and maintain good friendships
The 10 Best Sci-Fi Movies of All Time
The Hunger Games: Prequel release date announced
Archives Select Month September 2019 (5) August 2019 (10) July 2019 (13) June 2019 (16) May 2019 (11) April 2019 (11) March 2019 (14) February 2019 (19) January 2019 (21) December 2018 (22) November 2018 (24) October 2018 (25) September 2018 (44) August 2018 (40) July 2018 (29) June 2018 (37) May 2018 (46) April 2018 (21) March 2018 (40) February 2018 (24)
Categories Select Category Archaeology (1) Arts and Culture (4) Business and Economy (2) Chemistry (4) Cricket (10) Cycling (1) Data Security (5) Education (19) Entertainment (2) Environment and Energy (21) Football (4) Health and Medicine (31) Mathematics (3) Neuroscience (6) Opinion (4) Peace, Politics and Society (4) Science (62) Sports (22) Technology (5) Uncategorized (1) अर्थ/वाणिज्य (17) क्रिकेट (8) खेलकुद (26) घुमफिर (7) नेपाली (2) फुटबल (5) राजनीति (56) राष्ट्रिय (76) विचार (24) विज्ञान र प्रविधि (6) विश्व (34) शिक्षा (64) संस्कृति (8) साहित्य (14) स्वास्थ्य (10)
Saj Media Pvt. Ltd. Presents
Newroad, Pokhara, Nepal
Managing Director: Krishna Prasad Kafle
Editor: Radhika Sharma
Department of Information Registration Number:
Subscribe Us Now for the latest news and updates.
Copyright © 2019 All Rights Reserved, Nayapath